Galkacyo: Madaafiic laga soo ridey Galmudug oo lagu garaacay Xaafaadaha Garsoor iyo Israac (Dhegayso) – Radio Daljir
Diseembar 7, 2012 7:53 b 0
Galkacyo, Dec 7,Xaafadaha Garsoor iyo Israac ee Waqooyigaa magaaladda Galkacyo ayaaa saaka subaxnimadii waxaa lagu garaacay Madaafiic culculus oo laga soo riday dhanka Xaafadda maamulka Galmudug ee magaaladda Galkacyo.
Madaafiicdan ayaa waxyeelo kasoo gaartey dad shacab ah ayaan la ogayn sababta kaa danbeysa ee dadka shacabka ah loogu garaacay Madaafiicda laga soo ridey dhanka Galmudug.
Arintaaai waxaa si kulul uga hadlay maamulka Gobolka Mudug iyo taliska ciidanka Bilayska ee Puntland, Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac ‘Tigey’ iyo taliye kuxigeenka Bilayska Puntland Gen Muxiyadiin Axmed Muuse oo saxaafadda kula hadlay magaaalada Galkacyo ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin falalka noocan ah.
“Waxaa aad arkaysaan in maatada lagu garaaco wax loo dulqaadan karo maaha, Waxaana khasab ah in Jawaab cad laga bixiyo waxaas iyo wixii lamidka ah” ayuu yiri Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac ‘Tigey’
Sidoo kale Taliye kuxigeenka Ciidanka Bilayska Puntland Gen Muxiyadiin Axmed Muuse ayaaa sheegay in falalka noocan ahi ay yihiin kuwo soo noqnoqday xiligana aysan gacmaha ka laaban doonin.
” Arintaasu marar badan ayay soo noqnoqotay waa wax maalin walba dhaca, waxaan leenahay nabad baan rabnaa hade hadii nabada nalala garan waayo gacmaha laaban mayno’ Ayuu yiri Muxiyadiin Axmed Muuse.
“Guryahayaga ayaa nalagu soo weeraray, guriga aan leenahay anagaa leh guryahayaga cidna marti ugama noqonayno, guriga aan leenahay anagaa leh guriga aan leenahay cashuurtiisa anagaa leh guriga aan leenahay kiradiisa anagaa leh cidna marti ugama nihin” ayuu hadalkiisa raaciyey Gen Muxiyadiin Axmed Muuse.
Taliyuhu wuxuu sheegay in dadka faldenbiyeedka ku gala deegaanada Puntland gabaad lagu siiyo Galmudug isagoo sheegay in waardiye loogu sameeyo dhanka Galmudug.
Falalka noocan ah ayaa marar badan kusoo noqnoqday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, Waxaana maaamulka Puntland iyo Waxgarad reer Puntland ee gobolka Mudug ay marar badan ku baaqeen in la jooojiyo falalka noocan ah.